တယ်လီနောရဲ့ MyTelenor app 3.11 ရဲ့ “များများသုံး များများရယူ” ။ သင့်ကို ပိုပိုပြီး အသုံးပြုချင်အောင် စွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဒီဇိုင်း အသစ်တွေနဲ့ များများသုံးလေ ဆုများများရလေ အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor 3.11 ဟာ telco app တွေထဲမှာ ပထမဆုံးဘဏ်ငွေပေးချေမှု၊ အကြွေးဝယ်ကတ်များနဲ့ ပေးချေနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်များပါဝင်လာတာကြောင့်တယ်လီနောရဲ့ အစီအစဉ်အားလုံးကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Data Suboo 700MB, 900MB, 1000MB ကို MyTelenor app မှဝယ်ယူပြီး Shal Shake ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTelenor app 3.11 ကို app store သို့မဟုတ် google play store မှ download ပြုလုပ် ရယူနိုင်ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ QR code မှလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Snake and Ladder ကံထူးသူများစာရင်းသိရှိရန်
MyTelenor App ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီး ဆုလက်ဆောင်တွေရယူကြမယ်။
Referral Program ဆိုတာဘာလဲ?
မိမိသူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ MyTelenor App အသုံးပြုခြင်းမရှိသေးတဲ့သူတွေကို အသုံးပြုဖို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာနဲ့ SHOP App မှာအသုံးပြုဖို့ discount coupon တွေရမှာပါ။
MyTelenor App 3.11 ကို App Store ( သို့မဟုတ် ) Google Playstore မှ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Sign in ၀င်ရန်
App အသုံးပြုသူများ App ကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့် “Sign in with connect” ကိုရွေးပါ။.
Referral box သို့ဝင်ရန်
App ကိုပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူများ Sign in ၀င်လိုက်ပြီးသည်နှင့် home page မရောက်မီ Referral box အလိုအလျောက်ကျလာမည်။
Referral number ဖြည့်ရန်
App ကိုမိတ်ဆက်ပေးသော Telenor ဖုန်းနံပါတ် ကို contact box တွင်ဖြည့်ပြီး refer now ကိုနှိပ်ပါ
Referral bonus စစ်ဆေးရန်
App ကိုမိတ်ဆက်ပေးသော Telenor ဖုန်းနံပါတ် ပိုင်ရှင်သို့ Shop.com Bonus Coupon ရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ SMS ရရှိပါမည်။
အနည်းဆုံးကျပ်၅၀၀၀ဖိုး Shop mobile app တွင်အသုံးပြုလျှင် ၆၀၀ကျပ် ကူပွန်တစ်စောင် ရရှိပါမည်။
Shop mobile app တွင် အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ကျပ် သုံးပြီး ၆၀၀ကျပ် သက်သာခွင့်
Shop App ဟာမြန်မာပြည် နံပါတ် ၁ အကြီးမားဆုံး Online Shopping app ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းပေါင်း သိန်းကျော်နှင့် Brand ရာကျော်ကို ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး Shop က အိမ်တိုင်ရာရောက်တာဝန်ယူပြီးလာပို့ပေးပါတယ်။ အချိန်ကုန်သက်သာစွာ ဈေးဝယ်ဖို့ Shop app ကို ဖုန်းထဲမှာ ဒေါင်းထားလိုက်ပါ။ အခုပဲ Shop App ကို ရယူရန်
နေ့စဉ် နေ့လည် ၁နာရီမှ ညနေ ၅နာရီအထိ
ဒေတာစုဘူး ၇၀ဝMB ကို
1 Ya Kun Coffee
*ပေါင်မုန့်မီးကင်၂ချပ်ဝယ်ယူပြီး Ya kun discount code ကိုပြပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက် ရယူနိုင်ပါသည်။
Get MyTelenor App
4K Curved TV (၅) ဆု
128GB 4G (၁၀ ) ဆု
ဖုန်းဘေလ် (၂,၅၀၀) ကျပ်
နေ့စဉ် (၅,၀၀၀) ဆု
နေ့စဉ် (၃) ဆု
အထူးလက်ဆောင် နေ့စဉ်(၃,၀၀၀) ဆု
MyTelenor 3.11 app အသစ်က သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ယူဆောင်လာပါပြီ။ အခုပဲ download ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
ဖုန်းကို လှုပ်ပြီး အပိုဒေတာလက်ဆောင်တွေယူလိုက်ပါ
MyTelenor App မှ ဒေတာစုဘူး 700MB,900MB,1000MB ကိုဝယ်ယူပြီးဖုန်းကို SHAKE လိုက်တာနဲ့အများဆုံး150GB အထိအပိုဒေတာ လက်ဆောင်တွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု MyTelenor App အသစ်တွင် တယ်လီနောစတား ကာစတန်မာများအတွက် စတား အဆင့်စစ်ဆေးချက်များ၊ တယ်လီနော၏မိတ်ဖက် ပါတနာများမှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးအမြတ်များနှင့် သုံးစွဲနိုင်သောနည်းလမ်းများ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ပါသည်။
Shal Shake with MyTelenor
Secure with MyTelenor
Shal Shake Voice Packs ဆိုတာဘာလဲ?
Shal Shake Voice Packs တွင် တယ်လီနောအချင်းချင်း 3000 Seconds , 5400 Seconds နှင့် 7800 Seconds Voice package များကို ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MyTelenor application ကနေဝယ်မှသာ shal shake ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပက်ကေ့ဝယ်ပြီးတာနဲ့ shal shake pop up လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဗလာမပါ ဒေတာလက်ဆောင်တွေရရှိမှာပါ။
Telenor to Telenor 3000 Seconds package ကိုဝယ်ယူပြီး 10 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
Telenor to Telenor 5400 Seconds package ကိုဝယ်ယူပြီး 20 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
Telenor to Telenor 7800 Seconds package ကိုဝယ်ယူပြီး 50 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
MyTelenor app အသုံးမပြုသေးသော user များကို app အသုံးပြုရန်မိတ်ဆက်ပေးချင်းဖြင့် shop.com discount ကူပွန်များရယူခံစားနိုင်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
Shop.com Bonus Coupon ရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ SMS ရရှိပါမည်။
Telenor နံပါတ်အသုံးပြုသူများသာ ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
-Telenor ရိုးရိုး ဖုန်းနံပါတ်ကိုင်ဆောင်သူဆိုလျှင် Shop.com Bonus Coupon များရရှိပါမည်။ (အနည်းဆုံးကျပ်၅၀၀၀ဖိုး Shop mobile app တွင်အသုံးပြုလျှင် ၆၀၀ကျပ် ကူပွန်တစ်စောင်ရရှိပါမည်။)
-ပါတနာနံပါတ်များဆိုလျှင် Eload bonus ၁၀၀ကျပ် ရရှိပါမည်။
-CRE/ISE နံပါတ်များဆိုလျှင် လစဉ် bonus ရရှိပါမည်။
App download ပြုလုပ်သည့်အတွက် ၅၀ mb အခမဲ့ ရရှိပါမည်။
MyTelenor အသစ်မှာ အရင်ပါနေကျ QR code နဲ့top up လုပ်တာ balance transfer လုပ်တာ call me back ပို့တာတွေအပြင် package ဝယ်တိုင်း reward တွေရမယ့် shal reward, Data Suboo 700MB ဝယ်တိုင်းရမယ့် Shal Shake အပါအဝင် Star Members တွေအတွက် rewards တွေတခါထဲ redeem လုပ်လို့ရမယ့် features တွေပါဝင်ပါတယ်
Shal Shake Version2ဆိုတာဘာလဲ။
Shal shake Version2တွင် Data Suboo 700MB, 900MB နှင့် 1000MB များကို ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MyTelenor application ကနေဝယ်မှသာ shal shake ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပက်ကေ့ဝယ်ပြီးတာနဲ့ shal shake pop up လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဗလာမပါကံစမ်းမဲတွေ ရရှိမှာပါ။
Package ၃ ခုကနေ ဒေတာလက်ဆောင်တွေ အတူတူရမှာလား။
ရရှိမည့်ဒေတာလက်ဆောင်တွေကတော့အနည်းဆုံး 50 MB မှအများဆုံးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
DataSuboo 700 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 100 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
DataSuboo 900 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 120 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
DataSuboo 1000 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 150 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
Shal Shake2ကို ဘယ် Version မှာသုံးနိုင်မှာလဲ။
MyTelenor App 3.6 Version အသစ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 3.5 version နှင့်အောက် အသုံးပြုသူများသည် Shal Shake Version 1 ကိုသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTelenor App ကို ဗားရှင်းမြှင့်တင်ပြီး အသုံးပြုလျှင် (သို့) ယခုမှ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် စတင်အသုံးပြုလျှင် ရရှိမည့်အစီအစဉ်က ဘာလဲ?
MyTelenor App ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပြီးပထမဆုံးဝင်လိုက်ပါက 50MB ဒေတာအခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လည်းကောင်းအစီအစဉ်သည် ဗားရှင်းမြှင့်တင်ပြီး ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ်နှင့် MyTelenor App ကိုအခုမှစ၍အသုံးပြုသော သူများအတွက်သာအကျုံးဝင်ပါသည်။
MyTelenor App ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်တာနှင့် ၅၀ မီဂါဘိုက် ရရှိမှာလား ?
ဒေါင်းလုတ်လုပ်၊ သွင်းရုံနဲ့မရသေးပါ။ MyTelenor app ကိုဖွင့်ပြီးဝင်မှ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Visa/Master cards အများအတွက် ကဒ်ထုတ်ဝေသည့် ဘဏ်များ၏ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ အွန်လိုင်း ငွေးပေးချေမှု ဆောင်ရွက်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ MyTelenor app အတွင်းမှ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ဆောင်မှုမှာ ထိုဘဏ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ကဒ်သုံးစွဲသူ အနေဖြင့် ဘဏ်သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်၍ အသေးစိတ်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
MPU cards များနှင့် ငွေပေးချေနိုင်ရန် အတွက်မူ e-commerce အသုံးပြုခွင့်ကို ကဒ်ထုတ်ဝေသည့် ဘဏ်မှ လျှောက်ထာ၍ ဖွင့်ထားပေးရပါမည်။
ဤအခြေအနေမှာ ဖြစ်ခဲသော်လည်း သုံးစွဲသူမှ complaint တက်လာပါက TML ဘက်မှ စစ်ဆေး ကြည့်ရှု ပေးပါမည်။ Support team မှ complaint တက်သူ၏ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေး အတည်ပြုရန် တောင်းခံပါ။
ကဒ်ပိုင်ရှင်၏ မိုဘိုင်း နံပါတ်
ငွေဖြည့်လိုသည့် မိုဘိုင်း နံပါတ် (အကယ်၍ ကဒ်ပိုင်ရှင်၏ မိုဘိုင်းနံပါတ်နှင့် မတူပါက)
ကဒ်အမျိုးအစား (Visa/Master, MPU စသည်)
ကဒ်၏ ငွေကြေး အမျိုးအစား (မြန်မာကျပ်၊ ယူအက်စ် ဒေါ်လာ စသည်)
ကဒါ၏ နောက်ဆုံး နံပါတ် ၄ လုံး
ငွေပေးချေမှု လုပ်ဆောင်သည့် နေ့ရက် အချိန်
အထက်ပါ အချက်အလက်တို့ကိုMyTelenor နှင့်Telenor Pay user team တို့ကို ပေးပို့ပါက ၃ ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေ၍ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။